Miady Hevitra Ny Amin’ny Sivan’ny Aterineto I Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 10:52 GMT
( Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny 13 Jolay 2009 )
Tsy i Shina na Iran ihany no misy an'izao. Miady hevitra ny amin'ny sivana amin'ny aterineto i Aostralia mba hiarovana ny ankizy amin'ny mpihaza amin'ny aterineto. Fa nafàna ny adihevitra teo anatrehan'ny fanoheran'ireo vondrona maro mpiahy ny ankizy, isan'izany ny Save the Children (vonjeo ny ankizy ) sy ny vondron'ny fahalalahan'ny olom-pirenena.
Araka ny ABC News [amin'ny teny anglisy, tahaka ny rohy rehetra amin'ity lahatsoratra ity ]
“Ao anatin'ny vondron'ny fikambanana maro, toy ny Fahafahan'ny olom-pirenena any Aostralia sy ny Foibe Nasionaly miaro ny zon'ny Ankizy sy ny tanora, ny fiarovana ny ankizy izay namoaka fanambarana iraisana, androany, manohitra ny tsy maintsy hanivanana ny mpamatsy ny tolotra aterineto (ISP).
Hamafisin'ilay fanambarana fa tsy miaro ny ankizy amin'ny votoatin-dresaka ara-materialy na manakana ny fanaparitahana ny sary vetaveta atao amin'ny ankizy amin'ny aterineto ny sivana. »
Ambaran'ireo mpikatroka sy mpiaro ny zon'ny ankizy fa ahodin'ilay sivana ny volan'ny fandaharan'asa natao hiadiana amin'ny fomba mahomby amin'ny mpihaza amin'ny aterineto.
Simon Sheikh de GetUP (Mitsangana ianareo) – fikambanana izay mitady hanangana ny Aostralia mandroso- dia niteny tao amin'ny Australian IT
“ Manodidina ny 33 tapitrisa dolara isan-taona no lanilany foana aminà tetikasa tsy misy ilàna azy sy tena tsy misy dikany .” Tombanan'Atoa Sheikh fa afaka namatsiana fampidirana mpitandro filaminana fanampiny 300 mba hiadiana amin'ny sary vetaveta amin'ny ankizy amin'ny aterineto io vola io.
Amin'ny YouTube, no hanehoan'ny Aostrliana ny heviny – manohitra ny sivana atao amin'ny aterineto ny ankamaroany. Eto, ilay anarana tsara Australien en colère (Aostralia tezitra), no maneho ny ahiahiny fa tsy zavatra tsotra ny sivana atao amin'ny aterineto ary lany fotoana sy hery foana ny governemanta miezaka manara-maso ireo olona amin'ny aterineto.
Nifanasa tao amina adihevitra ihany koa ireo mpitoraka bilaogy. Manahy i Robert H Mercer fa ny Minisitry ny fifandraisan-davitra Stephen Conroy, izay namolavola ilay fanivanana, dia handray an-tànana ny zava-misy marina izay manasongadina ny vintana kelin'ny fahombiazan'ilay tetikasany.
“Efa hahavita ny sivana andran'ny governemanta ilay vondrona ahitàna ireo mpamatsy madinika ny tolotra aterineto ary nilaza ny Minisitry ny Fifandraisan-davitra Stephen Conroy fa heverina fa havoaka afaka enina na valo herinandro ny vokatra.
Ambaran'ny loholona Conroy fa ny vokatra no afaka hamaritra raha toa ka azon'ny governemanta irosoana ny fampiharana io lalàna mampifanolana io. Oh eny, azoko antoka fa hanaiky ny vokatra ireo mpiangetsana ireo … … … Vovoka nanditsoka fotsiny iny… … … efa nanao ny safidiny ry ilay vendrana ireo ! »